‘လွတ်လပ်တဲ့ ငါ’ ကဗျာရှင်(နေစကြာနိုင်) ~ ဒီမိုဝေယံ
ငါ့ဘဝကို သူများဘောင်နဲ့ ခတ်မထားဘူး……
ငါ့အလှကို တုပမှုနဲ့ အရောင်မခြယ်ဘူး…….
ငါ့စကားကို အများအကြိုက်နဲ့ ရောမလိုက်ဘူး…….
ငါ့ဆန္ဒကို အကြောက်တရားနဲ မဖိနှိပ်ဘူး…….
ငါ့ အကြားကို ၀ါဒမှိုင်းနဲ့ ပိတ်မထားဘူး……..
ငါ့စာကို သူ့အာဏာနဲ့ အဆိပ်မခတ်ဘူး…….
ဘယ်သူ မပေးပေး ငါ့အတွေးနဲ့.........
*** လွတ်လပ်စွာတွေး၍ ဘဝကို စတေးကာ လွတ်လပ်မှုကို ပေးသွားသော ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို ဤစာဖြင့် ဂါရဝပြုပါ၏။ အားလုံးလွတ်လပ်မှုကို တကယ်မြတ်နိုးနိုင်ကြပါစေ။ လွတ်လပ်မှုအတွတ် ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။***